कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक भएकाे दाबी, विश्वका ६० देशमा पुग्याे ! – Sandesh munch
कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक भएकाे दाबी, विश्वका ६० देशमा पुग्याे !
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७ समय: १४:५८:५५
एजेन्सी, १० माघ । कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक भएको दाबी गरिएकाे छ । अनुसन्धानकर्तारुले पछिल्लो समय बेलायतमा नयाँ प्रजातिकाे कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनहरुको संख्या दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको बताइरहेका बेला त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि उक्त दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले भनेका छन् कि यो भाइरस पहिलेको भन्दा धेरै नै खतरनाक छ, त्यसैले सबै नागरिकले पहिलेको भन्दा पनि अझ बढी सुरक्षा मापदण्डहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।शुक्रबार डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन् । उनले यो भाइरस पहिलोपटक गत महिना मात्र इंगल्याण्डको केन्टमा देखिएको पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ प्रजातिको भाइरस पुरानो भन्दा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बढी मात्रामा संक्रमण फैलाउने र घातक समेत रहेकाे जाेनसनकाे भनाइ छ ।
बेलायतबाट नै शुरु भएको भनिएको कोरोनाको नयाँ स्वरुपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार सो भाइरस गत हप्तामा मात्र विश्वका १० वटा देशमा पुगेको हो । उक्त संगठनले महामारीको यो स्वरुप दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ देशमा पुगिरहेको बताएको छ ।
बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले पनि यो संक्रमण पुरानो भन्दा खतरनाक भएको प्रमाण मिलेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कोरोना भाइरसको पहिलेको संक्रमणमा १ हजार जना सङ्क्रमितमा १० जनाको ज्यान गएको पाइएको थियो भने यो नयाँ प्रजातिको संक्रमणमा भने एक हजार जना सङ्क्रमितहरुमा १३ वा १४ जनाको नै निधन भएको पाइएको छ ।
बेलायतमा ७८ प्रतिशत बढी संक्रमण
प्रधानमन्त्री जोनसनले यहाँका कम्तीमा पनि ३८ हजार नागरिक सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा रहेका छन् । उनले यो नयाँ प्रजातिको भाइरस बेलायतमा प्रवेश गरेपछि यसले पहिलेको भन्दा पनि धेरै मानिसलाई संक्रमित बनाएको छ । उनले बेलायतमा कोरोनाको पहिलो वेभभन्दा पनि अहिले देखिएकाे नयाँ वेभका कारण कम्तीमा पनि ७८ प्रतिशत बढी मात्रामा नागरिकलाई सङ्क्रमित तुल्याएको छ ।